Zazavavikely mianjera, mila tandremana tsara…
Mandrindra ny fadimbolana amin’ny persily !
Tsy natao hanomezana hanitra sy tsiro ny sakafo fotsiny ihany ny persily fa mitondra soa ho an’ny vatana ihany koa. Be otrikaina, manadio ny ao anaty, manatsara ny fandevonan-kanina, manala ireo fanaintainana mandritra ny fadimbolana, misoroka ny homamiadana…
Ireo tena antony mampatavy ny vehivavy!
Raha mahatsikaritra isika dia mihangeza ny vehivavy rehefa mitombo taona. Raha tombanana dia mahazo hatramin’ny 7,5 kg eo ho eo, eo anelanan’ny 20 hatramin’ny 50 taona, ny vehivavy iray. Ny anton’izany no hojerentsika.
Ranom-boatabia : Mampitazona kalsioma!
Ahitana singa antsoina hoe : « lupocène », mpanala arafesina sady mpanadio poizina ao anaty anatin’ny voatabia.
Mampitony ny fanaintainan’ny fadimbolana
Fijaliana tsy maintsy hatrehin’ny vehivavy isam-bolana ny fahatongavan’ny fadimbolana. Miharo fanelingelenana sy fanaintanana izy ireny indraindray, izay azo toniana amin’ireto fomba natoraly ireto.
Mampitony « hemorroïde » amin’ny vinaingitra
Mitohana rehefa ririnina : Fa maninona?
Isan’ireo tranga miseho amintsika rehetra, na ankizy na olon-dehibe, indrindra amin’izao fotoanan’ny ririnina izao, ny fitohanana. Ireto no tsara ho fantatra mahakasika azy, ny mahatonga azy ary ny atao hisorohana azy.
Ohatra « gouter » mety ho an’ny ankizy
Zava-dehibe ho an’ny ankizy ny ody am-bavafoa, ka tsy tokony ampandeferina. Araka ny nambaran’ireo manam-pahaizana dia in-droa isan’andro no tokony omena izany izy ireo. Eo amin’ny fotoana hanomezana azy fotsiny no tsara jerena, mba tsy handavany ny sakafo atoandro sy hariva.
Hoditra kely manify, mandrakotra ny ampahany na tanteraka amin’ny fivaviana, ny « hymen ». Eo amin’ny zazakely dia mbola tsy tena hary tanteraka ny fivaviana, fa kosa efa misy ny « hymen ».
Mety ho rovitra izy io, raha nisy dona nahazo ny fivavian’ny zazakely, toy ny hoe nianjera. Indro kosa ny tokony hatao, raha sendra izany araka ny nambaran’ny dokotera sy ho tohin’ny fandaharana “Taiza Vatana” tao amin’ny “Top Radio” omaly.
Mila manatona dokotera
Amin’ny ankapobeny dia voaaro ao anatin’ny fivaviana ny « hymen », satria miafina be eo anelanelan’ireo molotra roa lehibe. Raha sendra misy faharovitana tampoka io “hymen” io, vokatry ny fianjerana ohatra, na tranga hafa dia tokony hanatona dokotera avy hatrany. Mazàna, ny hahafantarana azy dia tsy maharitra ary tsy betsaka firy ny rà mivoaka amin’ny fivavian’ilay zazakely. Mba hampilamin-tsaina tanteraka anefa dia aleo ny dokotera foana ihany no mamaritra, na rovitra na tsia, io hoditra kely io, indrindra raha mitomany tsy an-kijanona ilay zaza, na misy rà mandeha ihany koa.